Izimpawu Zamahhala Ze-Crypto Ezinhle Kakhulu ngoMeyi 2022 kanye Nezindaba ze-Crypto | cryptosignals.org
Ukuhweba ManjeIdiphozithi engu-250$ ku-eToro ukuze Uthole Izimpawu Zethu Ze-VIP Mahhala! Ukuhweba izinkulungwane zamaCFD
Izimpawu ezihamba phambili ze-Crypto 2022
ICryptoSignals.org iyiqembu labathengisi abaqeqeshwe kakhulu abebelokhu behweba imakethe ye-cryptocurrency kusukela ngo-2014
Sinqume ukwakha umphakathi ku yocingo ukuze abanye bafunde kwizimpawu zethu ezinembile ze-idijithali yemali.
Joyina iTelegram Yethu Yamahhala
Vula Izimpawu Zansuku zonke ze-Cryptocurrency
Joyina okwethu Iqembu le-VIP ngokukhetha iphakethe elingezansi elilungele wena, sinikela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali esigcwele sezinsuku ezingama-30 ngakho-ke akukho lutho oluzolahleka ngokuzama amasiginali wethu wekhwalithi ephezulu ye-idijithali yemali.
Kukhokhisiwe Monthly £ 42
Edume kakhulu Kukhokhisiwe Quarterly £ 78
Kukhokhisiwe IBI-ANNUALLY £ 114
Kukhokhisiwe Minyaka yonke £ 210
KHETHA IBHEREZA ELIKHULU KWEZWE LAKHO
Yiba Umhwebi Ochwepheshe!
Vula i-akhawunti ngomunye wabathengi bethu. Futhi uthole ukufinyelela kokuphila konke ku- Izimpawu ze-VIP Crypto Mahhala! Bhalisa futhi ubeke ubuncane obungu-250$ ngomthengisi wethu olawulwayo we-Crypto ngezansi.
I-eToro yipulatifomu enezinto eziningi enikezela kokubili ukutshala imali kwi-Forex, Amasheya, kanye ne-Cryptocurrencies, kanye nokuhweba izimpahla zeCFD. Ama-CFD amathuluzi ayinkimbinkimbi futhi eza nengozi enkulu yokulahlekelwa yimali ngokushesha ngenxa yokusebenzisa amandla.
Ama-CFD amathuluzi ayinkimbinkimbi futhi eza nengozi enkulu yokulahlekelwa yimali ngokushesha ngenxa yokusebenzisa amandla. U-71.2% wama-akhawunti wabatshalizimali abathengisayo alahlekelwa yimali lapho ethengisa ama-CFD nalo mhlinzeki.
Kufikela ku-500:1 isilinganiso, hweba ngezinkulungwane zama-CFD kanye nezindawo zokuSebenza ezitholakalayo. Ama-Indices, i-FX, i-Crypto nokuningi endaweni eyodwa. Senza imayela elingeziwe ngokunikeza isixhumi esibonakalayo esisebenziseka kalula nezici ezintsha.
Sithumela izimpawu ezi-3 ze-VIP ngesonto iqembu leTelegram lamahhala, isiginali ngayinye iza nokuhlaziywa okuphelele kwezobuchwepheshe kokuthi kungani sithatha ukuhweba nokuthi singakufaka kanjani kumthengisi wakho.
Joyina iTelegram Yethu YamahhalaFunda ngezimpawu zethu
Ikhaya Lamasiginali aphezulu we-Crypto
Ulethwe Ngokuqonde Kwakho Yocingo App Esikhathini Sangempela!
Ithimba lethu labathengisi abasebenza ezindlini ku-CryptoSignals.org liskena izimakethe ze-crypto ubusuku nemini ukuze ungadingi. Ngokuhlanganiswa kokuhlaziywa okujulile kwezobuchwepheshe, ama-algorithms e-AI, nocwaningo oluyisisekelo - ICryptoSignals.org ihlala ifuna amathuba okuhweba amalungu ethu.
Uma kungokokuqala usivakashela, sivumele sikuchazele ukuthi senzani lapha ICryptoSignals.org
FUNDA IZIBUYEKEZO ZAKAMUVA EZINDABENI ZETHU ZOBUCHWEPHESHE NEZOKUSEKELA
I-DeFi Coin Prediction Price: DEFC/USD Trades Near $0.30 Resistance
I-Lucky Block Price Prediction: LBLOCK/USD Iya phezulu
Ukunikezwa Kwe-Bitcoin Ekuhwebeni Kwehla kuya Ezinyangeni eziyi-18 Eziphansi ngoMeyi Njengoba Ukwesaba Kwemakethe Kuphakamisa
I-Bitcoin (BTC/USD) Izivumelwano Zohwebo ngo-$30,000
I-Cardano Ihlanganisa ngaphezu kwe-$ 0.50 Ukusekelwa Kwentengo Engenzeka Ukuphindaphinda
I-TerraUST (USTUSD) Iqala Umsebenzi Wemakethe Ngomnsalo We-Bearish
I-DeFi Coin Prediction Price: I-DEFC/USD Ranges Njengoba Intengo Ibhekisa ENyakatho
I-Lucky Block Price Prediction: LBLOCK/USD Spikes Ngaphezulu kwe-$0.0025
Izinsolo ze-Ponzi Scheme ngokumelene ne-LUNA Ziphinde Ziqhamuke Ngokulandela Amazwi Angathandeki avela ku-Terra CEO
I-Bitcoin Cash (BCH/USD) Imakethe Yezimakethe Ngaphansi Kokucindezeleka
I-Ethereum Ihlanganisa ngaphezu kwe-$1,763 njengoba Ilungiselela Ukubuyisela I-$2,200
I-Terra (LUNAUSD) Ithwala Ukubhekana Nokushaywa Kokuqala Emakethe
I-Cryptocurrency yethu Ewinayo
Isiginali VIP Group
Uma umusha emakethe ye-cryptocurrency futhi ungathanda ukufunda ukuthi ungayithengisa kanjani, lawula ubungozi ngendlela efanele futhi wenze i-akhawunti yakho yokuhweba ibe yinzuzo bese ubona okuningi ngalokho esikunikeza ngezansi.
Sihlose ukufeza ama-pips ayi-1500 ngenyanga njalo ngenyanga sidayisa i-Bitcoin kuphela!
Konke ukuhweba okukodwa kuza nokuhlaziywa okuphelele kwezobuchwepheshe, kuchaza ukuthi kungani sithatha ukuhweba, lokhu sikwenzela ukuthi ufunde njengoba uhweba.
INGOZI YOKUTHOLA UMSEBENZI WENGOZI
Sichaza ngokusobala i-RRR (isilinganiso somvuzo wobungozi) ngakho konke ukuhweba futhi sisebenze ngesilinganiso esingu-1: 2 & 1: 3 ukuze ungazibeki engcupheni enkulu ngokuhweba ngakunye futhi ube nethuba eliphakeme lokwenza inzuzo.
Izimpawu zethu zithunyelwa ngeTelegram kuphela, ngaleyo ndlela ngokushesha lapho isignali ingena, iza ngokushesha kuwe.
Ngokujoyina iqembu lethu le-VIP uvula inala yolwazi nesipiliyoni kubathengisi bethu, inkokhelo encane yenyanga kusho ukuthi ujoyina i-ELITE
Imisebenzi yethu ayenziwa ngaso sonke isikhathi emakethe, ngakho-ke uzoba nesikhathi esiningi sokungena nabo, sishintsha ukuhweba, isikhumba sasekhanda futhi sisebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zokuhweba njenge-BUY STOPS, SELL STOPS & BUY LIMIT njll.
Joyina Iqembu Lethu Lamahhala leTelegram
Sithumela izimpawu ezi-3 ze-VIP ngesonto eqenjini lethu lamahhala leTelegram, isiginali ngayinye iza nokuhlaziywa okuphelele kwezobuchwepheshe kokuthi kungani sithatha ukuhweba nokuthi singakufaka kanjani kumthengisi wakho.
Zisebenza Kanjani Izimpawu Zethu Ze-Crypto
Uma umusha ngokuphelele emhlabeni wezimpawu ze-crypto, sivumele ukuthi sidilize izisekelo zakho ngokwemigomo yeLayman.
Isisekelo esiyinhloko sezimpawu ze-crypto ukuthi uzothola isiphakamiso sokuhweba. Lokhu kuzokwenzeka ngesikhathi sangempela nge
yocingo - ngakho-ke awusoze waphuthelwa yithuba lokuhweba elikhona. Isiginali ngayinye iqembu elikuyo ICryptoSignals.org ukuthumela kuzoba nesethi yolwazi olubalulekile. Yilolu lwazi olukutshela ukuthi ungazuza kanjani kwizimpawu zethu ngokubeka ifayela le-
ama-oda afanele kumthengisi wakho omkhethile. Ukukunikeza umbono wokuthi yini a ICryptoSignals.org Isiginali ye-crypto ibukeka - hlola isibonelo se- LTC / USD ngezansi:
Njengoba ukwazi ukubona kulokhu okungenhla, amasiginali amahle kakhulu e-crypto kufanele aqukethe amaphoyinti wedatha ayisihlanu. Leli ngababili le-crypto uqobo - okulesibonelo, i-LTC / USD. Uzobona ukuthi isiginali nayo icacisa ukuhamba isikhathi eside - okusho ukuthi umhlaziyi wethu ongaphakathi endlini ucabanga ukuthi laba bazokhuphuka ngenani. Okubaluleke kakhulu, amasiginali amahle kakhulu e-crypto nawo kufanele eze nomkhawulo odingekayo, ukumisa ukulahleka, kanye namanani entengo yenzuzo. Uma umusha kulawa magama angukhiye wokuhweba, kungcono ukuthi ube nokuqonda okuqinile kokuthi kusho ukuthini lokhu ngaphambi kokubhalisela insizakalo yesiginali ye-crypto.
Ukusiza ukusula inkungu, sichaza la maphuzu wedatha yesiginali ebalulekile ngemininingwane engezansi.
OKUFANELE UBUKELE KANJANI IZIMPAWU ZE-CRYPTO?
Nakhu ukuphazamiseka kokuthi amasiginali amahle kakhulu e-crypto kufanele abukeke kanjani - nokuthi igama ngalinye lisho ukuthini.
Lokhu kuchaza kahle. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kokusho ukuthi uzodinga ukwazi ukuthi isiphi isignali yethu ehlobene nayo. Kufanele siqaphele ukuthi abahlaziyi bendlu kwaCryptoSignals.org benza ngokukhethekile ezimakethe eziningi ze-cryptocurrency. Lokhu akufaki kuphela i-crypto-to-fiat, kepha namabili we-crypto-to-crypto, nawo. Kulabo abangazi, i-crypto-to-fiat pair izoqukatha imali eyodwa yedijithali efana neBitcoin nemali eyodwa ye-fiat njengeDola laseMelika. Kulesi sibonelo, laba bobabili bazomelwa njenge-BTC / USD. Ngenhlanhla, leli yipara ye-cryptocurrency edayiswa kakhulu embonini - ngezigidigidi zamadola ezishintsha izandla usuku nosuku. Unalokhu engqondweni, amasiginali amaningi we-crypto owathola kithi, iCryptoSignals.org izogxila kulo makethe. Kodwa-ke, abathengisi bethu banolwazi lokuhweba ngamabhangqa ahlukahlukene we-crypto-to-crypto. Lokhu kufaka ukuthandwa kwe-BTC / ETH - okusho ukuthi sithengisa inani lokushintshanisa phakathi kweBitcoin ne-Ethereum. Enye i-crypto pair ukuthi ...
Mude noma Mfushane
Imethrikhi eyisihluthulelo eyengeziwe ephoqelekile endaweni yesiginali ye-crypto yinkomba yemakethe. Ngamanye amagama, kufanele uhambe isikhathi eside noma ufushane ngokuhweba? Ngaphandle kwalolu lwazi, isignali ye-crypto ibingaba yize. Kulabo abangazi: Uma isiginali yethu ye-crypto ikutshela ukuthi uhambe isikhathi eside, lokhu kusho ukuthi sicabanga ukuthi laba bobabili bazokhuphuka ngenani Uma isiginali yethu ye-crypto ikutshela ukuthi ufushane, lokhu kusho ukuthi sicabanga ukuthi laba bobabili bazokwehla ngenani Ukucacisa ngokuqhubekayo Uma isiginali ye-crypto ikuyala ukuthi uhambe isikhathi eside, kuzodingeka ukuthi ufake i-oda lokuthenga kumthengisi wakho we-crypto omkhethile Uma, noma kunjalo, isignali ye-crypto ikutshela ukuthi ufushane, kuzodingeka ukhethe i-oda lokuthengisa Ithimba lethu abahlaziyi kwaPipSignals bakhululekile ukuhamba isikhathi eside futhi kufushane ngama-crypto pair. Ngokweqile, akukho okunamathiselwe ngokomzwelo kwimali yedijithali efanele esiyithengisayo. Esikhundleni salokho, inhloso yethu enkulu ukwenza inzuzo ngesikhundla. ...
Linganisela inani lentengo
Ungalenzi iphutha ngakho - amasiginali amahle kakhulu e-crypto azohlala eza nentengo yoku-oda edingekayo. Uma umusha ekuhwebeni, ngokuvamile unezinketho ezimbili uma kukhulunywa ngokungena emakethe. Ngokuzenzakalelayo, abathengisi abaningi abaku-inthanethi bakubuza ukuthi ufuna ukufaka 'i-oda lemakethe'. Lokhu kumane kusho ukuthi umthengisi uzokwenza ukuhweba kwakho khona manjalo - ngentengo elandelayo etholakalayo. Yize lokhu kukuhle ekutshalweni kwesikhathi eside, akukufanele impela ukuhweba nge-short-term crypto. Lokhu kungenxa yokuthi kuyingozi kakhulu ukufaka ingozi ekuhwebeni ngentengo ethile - ngocwaningo olusisekelo olwenziwe. Isibonelo, ake sithi thina kwaCryptoSignals.org sidayisa i-BTC / USD - okwamanje enentengo engu- $ 49,500. Ithimba lethu labahlaziyi bangaphakathi bangabheka ubuchwepheshe futhi banqume ukuthi uma iBTC / USD yephula u- $ 50,000 - bese kufanele kuthathwe isikhundla eside. Ukuqinisekisa ukuthi singena ngentengo engaphezu kwe- $ 50,000 - hhayi ama-curren ...
Intengo ye-Stop-Loss Order
Kuze kube manje, sesisungule ukuthi amasiginali amahle kakhulu e-crypto azokutshela ukuthi yikuphi ukuhweba okufanele ukuhwebe, ukuthi kufanele uhambe isikhathi eside noma mfushane, nokuthi iyiphi intengo yokungena okufanele usethe i-oda lakho lomkhawulo. Kodwa-ke, lokhu kuyingxenye yempi. Ngemuva kwakho konke, ukuze uhwebe ngendlela engabeki ubungozi, kufanele ube nesu lokungena endaweni. Nakulokhu futhi, thina kwaCryptoSignals.org siqinisekisa ukuthi unalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uzuze kwizimpawu zethu ze-crypto - yingakho sihlala sinikeza ngama-stop-loss kanye nama-oda wenzuzo. Mayelana nokulahleka kokuyeka, leli yithuluzi lokulawulwa kwezinhlekelele eliqinisekisa ukuthi asilahlekelwa yimali eningi ngokuhweba - uma kungafanele kuhlelwe. Lokhu kubalulekile, njengoba noma sinerekhodi lesikhathi eside lokwenza kahle emakethe ye-crypto - asisho ukuthi sizonqoba ukuhweba ngakunye. Ngokuphambene nalokho, kuzohlala njalo kulahlekelwa ukuhweba. Unalokhu engqondweni, siphakamisa intengo efanelekile yoku-stop-loss okufanele uyisebenzise lapho usebenza ngezimpawu zethu ze-crypto. Esikhathini ...
Inani Lokuthatha Inzuzo
Kunolunye ucezu lolwazi olubaluleke kakhulu amasignali amahle kakhulu e-crypto azokunikeza lona - futhi leyo yintengo yokuphakanyiswa yokuthatha inzuzo Lokhu kusebenza ngokufana ne-stop-loss order, kodwa esikhundleni sokunciphisa izingozi zethu, kuzofuna ukuvala inzuzo yethu ekuhwebeni. Esibonelweni esisinikeze phambilini, siqaphele ukuthi intengo ye-oda lokuthatha inzuzo ephakanyisiwe ingama- $ 238.74. Lokhu kuhlala ku-3% ngaphezulu kwentengo ephakanyisiwe yoku-oda umkhawulo ka- $ 231.79 - okusho ukuthi sifuna ukwenza inzuzo ka-3% kulesi siginali ethile ye-crypto. Nakulokhu futhi, uma intengo yenzuzo ingalinganiswa nemakethe - i-crypto broker okukhulunywa ngayo izovala ngokuzenzakalela ukuhweba. Ngakho-ke, singakhiya inzuzo yethu ngaphandle kokudinga ukuhlala kudivayisi yethu ukuze siphume mathupha isikhundla.
Ingozi vs Umvuzo
Ukuqhubeka kusuka esigabeni esingenhla sokumisa ukulahleka kanye nama-oda wenzuzo, ithimba lethu labahlaziyi ku-CryptoSignals.org lizohlala linombono wobungozi / umvuzo lapho lithumela amasiginali we-crypto. Esibonelweni esingenhla, ingozi ibe ngu-1% - njengoba kulapho inani lethu eliphakanyisiwe lokulahleka kwaba inani. Ingxenye yomvuzo we-equation ibiyi-3% - ngoba kulapho sibeke khona i-oda lethu lokuthatha inzuzo. Ngokweqile, iningi lamasiginali e-crypto esiwathumelayo azolandela isilinganiso se-1/3 sobungozi / somvuzo. Ngamagama alula, lokhu kusho ukuthi sibeka engcupheni i-1% yenhlokodolobha yethu ukwenza inzuzo ka-3%. Ngokwenza njalo, sidinga kuphela ukuthi kube nokuhweba okukodwa okuphumelelayo kokuthathu ukuze senze inzuzo.
Lokhu kuchaza kahle. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kokusho ukuthi uzodinga ukwazi ukuthi isiphi isignali yethu ehlobene nayo.
Kufanele siqaphele ukuthi abahlaziyi bendlu kwaCryptoSignals.org benza ngokukhethekile ezimakethe eziningi ze-cryptocurrency. Lokhu akufaki kuphela i-crypto-to-fiat, kepha namabili we-crypto-to-crypto, nawo.
Kulabo abangazi, ipheya le-crypto-to-fiat lizoqukatha imali eyodwa yedijithali efana neBitcoin nemali eyodwa ye-fiat njengeDola laseMelika. Kulesi sibonelo, laba bobabili bazomelwa njenge-BTC / USD.
Ngenhlanhla, leli yipara ye-cryptocurrency edayiswa kakhulu embonini - ngezigidigidi zamadola ezishintsha izandla usuku nosuku. Unalokhu engqondweni, amasiginali amaningi we-crypto owathola kithi, iCryptoSignals.org izogxila kulo makethe.
Kodwa-ke, abathengisi bethu banolwazi lokuhweba ngamabhangqa ahlukahlukene we-crypto-to-crypto. Lokhu kufaka ukuthandwa kwe-BTC / ETH - okusho ukuthi sithengisa inani lokushintshanisa phakathi kweBitcoin ne-Ethereum.
Amanye ama-crypto pair athanda ukuhweba ngabahlaziyi bethu abangaphakathi yi-XRP / XLM. Lokhu kuqukethe iRipple neStellar futhi kuveza amathuba amaningi wesiginali ye-crypto ngenxa yezici zayo eziguquguqukayo ngokweqile.
Imethrikhi eyisihluthulelo eyengeziwe ephoqelekile endaweni yesiginali ye-crypto yinkomba yemakethe. Ngamanye amagama, kufanele uhambe isikhathi eside noma ufushane ngokuhweba? Ngaphandle kwalolu lwazi, isignali ye-crypto ibingaba yize.
Uma isiginali yethu ye-crypto ikutshela ukuthi uhambe isikhathi eside, lokhu kusho ukuthi sicabanga ukuthi laba bobabili bazokwenyuka ngenani
Uma isiginali yethu ye-crypto ikutshela ukuthi ufushane, lokhu kusho ukuthi sicabanga ukuthi lezi zibili zizokwehla ngenani
Uma isiginali ye-crypto ikuyala ukuthi uhambe isikhathi eside, kuzodingeka ukuthi ufake i-oda lokuthenga kumthengisi wakho we-crypto omkhethile
Uma, noma kunjalo, isignali ye-crypto ikutshela ukuthi ufushane, kuzodingeka ukhethe i-oda lokuthengisa
Ithimba lethu labahlaziyi kwaPipSignals likhululekile ukuhamba isikhathi eside futhi lifushane kuma-crypto pair. Ngokweqile, akukho okunamathiselwe ngokomzwelo kwimali yedijithali efanele esiyithengisayo. Esikhundleni salokho, inhloso yethu enkulu ukwenza inzuzo ngesikhundla.
Ungalenzi iphutha ngakho - amasiginali amahle kakhulu e-crypto azohlala eza nentengo yoku-oda edingekayo. Uma umusha ekuhwebeni, ngokuvamile unezinketho ezimbili uma kukhulunywa ngokungena emakethe.
Ngokuzenzakalelayo, abathengisi abaningi abaku-inthanethi bakubuza ukuthi ufuna ukufaka 'i-oda lemakethe'. Lokhu kumane kusho ukuthi umthengisi uzokwenza ukuhweba kwakho khona manjalo - ngentengo elandelayo etholakalayo.
Yize lokhu kukuhle ekutshalweni kwesikhathi eside, akukufanele impela ukuhweba nge-short-term crypto. Lokhu kungenxa yokuthi kuyingozi kakhulu ukufaka ingozi ekuhwebeni ngentengo ethile - ngocwaningo olusisekelo olwenziwe.
Isibonelo, ake sithi thina kwaCryptoSignals.org sidayisa i-BTC / USD - okwamanje enentengo engu- $ 49,500.
Ithimba lethu labahlaziyi bangaphakathi bangabheka ubuchwepheshe futhi banqume ukuthi uma iBTC / USD yephula u- $ 50,000 - bese kufanele kuthathwe isikhundla eside.
Ukuqinisekisa ukuthi singena ngentengo engaphezu kwama- $ 50,000 - hhayi intengo yamanje engu- $ 49,500 - kulapho kungena khona i-oda lomkhawulo.
Ngamanye amagama, ukuze ukuhweba kwethu kwenziwe ngama- $ 50,000 - kumele senze i-oda elilinganiselwe ngale ntengo. Uma senza kanjalo, umthengisi wethu uzokwenza kuphela ukuhweba kwethu uma futhi lapho i-BTC / USD ishaya u- $ 50,000. Kuze kube yileso sikhathi, i-oda lomkhawulo lihlala lilindile.
Kuzo zonke izimo ezingavamile ezimbalwa, zonke izimpawu ze-crypto ku-CryptoSignals.org zizofika nentengo ephakanyisiwe yoku-oda umkhawulo. Okuwukuphela kokuhlukile lapha uma sibona ithuba lokuhweba elidinga ukwenziwa ngokushesha ukugwema ukuphuthelwa.
Kuze kube manje, sesisungulile ukuthi amasiginali amahle kakhulu e-crypto azokutshela ukuthi yikuphi okufanele ukuhwebelane ngakho, ukuthi kufanele uhambe isikhathi eside noma mfushane, nokuthi iyiphi intengo yokungena okufanele usethe i-oda lakho lomkhawulo.
Kodwa-ke, lokhu kuyingxenye yempi. Ngemuva kwakho konke, ukuze uhwebe ngendlela engabeki ubungozi, kufanele ube nesu lokungena endaweni.
Nakulokhu futhi, thina kwaCryptoSignals.org siqinisekisa ukuthi unalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uzuze kwizimpawu zethu ze-crypto - yingakho sihlala sinikeza ngama-stop-loss kanye nama-oda wenzuzo. Mayelana nokulahleka kokuyeka, leli yithuluzi lokulawulwa kwezinhlekelele eliqinisekisa ukuthi asilahlekelwa yimali eningi ngokuhweba - uma kungafanele kuhlelwe.
Lokhu kubalulekile, njengoba noma sinerekhodi lesikhathi eside lokwenza kahle emakethe ye-crypto - asisho ukuthi sizonqoba ukuhweba ngakunye.
Ngokuphambene nalokho, kuzohlala kulahleka ukuhweba. Unalokhu engqondweni, siphakamisa intengo efanelekile yoku-stop-loss okufanele uyisebenzise lapho usebenza ngezimpawu zethu ze-crypto.
Esibonelweni sesiginali se-crypto esisinikeze phambilini, siqaphele ukuthi kufanele kubekwe isikhundla eside ku-BTC / USD ngentengo yokungena engu- $ 231.79. Siphinde sathi i-oda lokulahleka kokumiswa kufanele libekwe ku- $ 229.48.
Lokhu kunesizathu esizwakalayo - ngoba lokhu kubonisa ukulahlekelwa okuphezulu okungu-1%. Lokho kusho ukuthi, uma i-BTC / USD iphikisana nathi ngo-1% bese ishaya inani elingu- $ 229.48 - i-oda lokulahleka kokumiswa lizongena. Uma kwenzeka, umthengisi we-crypto uzosivala ngokuzenzekelayo isikhundla bese sihamba kude nokulahleka okuncane kwe-1%.
Kunolunye ucezu lolwazi olubaluleke kakhulu amasignali amahle kakhulu e-crypto azokunikeza lona - futhi leyo yintengo yokuphakanyiswa yokuthatha inzuzo. Lokhu kusebenza ngokufana ne-stop-loss order, kodwa esikhundleni sokunciphisa izingozi zethu, kuzofuna ukuvala inzuzo yethu ekuhwebeni.
Esibonelweni esisinikeze phambilini, siqaphele ukuthi intengo ye-oda lokuthatha inzuzo ephakanyisiwe ingama- $ 238.74. Lokhu kuhlala ku-3% ngenhla kwentengo yoku-oda ephakanyisiwe yemali engu- $ 231.79 - okusho ukuthi sifuna ukwenza inzuzo ka-3% kulesi siginali ethile ye-crypto.
Nakulokhu futhi, uma intengo yenzuzo ingalinganiswa nemakethe - i-crypto broker okukhulunywa ngayo izovala ngokuzenzakalela ukuhweba. Ngakho-ke, singakhiya inzuzo yethu ngaphandle kokudinga ukuhlala kudivayisi yethu ukuze siphume mathupha isikhundla.
Ukuqhubeka kusuka esigabeni esingenhla sokumisa ukulahleka kanye nama-oda wenzuzo, ithimba lethu labahlaziyi ku-CryptoSignals.org lizohlala linombono wobungozi / umvuzo lapho lithumela amasiginali we-crypto.
Esibonelweni esingenhla, ingozi ibe ngu-1% - njengoba kulapho inani lethu eliphakanyisiwe lokulahleka kwaba inani. Ingxenye yomvuzo we-equation ibiyi-3% - ngoba kulapho sibeke khona i-oda lethu lokuthatha inzuzo.
Ngokweqile, iningi lamasiginali e-crypto esiwathumelayo azolandela isilinganiso se-1/3 sobungozi / somvuzo. Ngamagama alula, lokhu kusho ukuthi sibeka engcupheni u-1% wemali yethu ukuze sizuze ngo-3%. Ngokwenza njalo, sidinga kuphela ukuthi kube nokuhweba okukodwa okuphumelelayo kokuthathu ukuze senze inzuzo.
Izimpawu ze-Crypto zabaqalayo ku ICryptoSignals.org
01. Qonda iMakethe
Ngabe ufuna ukuhweba ngama-cryptocurrensets afana neBitcoin,
U-Ethereum noRipple - kepha banokuqonda okuncane ukuthi le makethe isebenza kanjani?
Uma kunjalo, kufanele wazi ukuthi abathengisi abanolwazi basebenzise iminyaka yokufunda ubuciko bokuhlaziywa kobuchwepheshe. Lokhu kusho
ukwenza ucwaningo oluthuthukile ngamathrendi wamanani entengo ye-idijithali yemali ngokusebenzisa izinkomba ezahlukahlukene. Cabanga ngemigqa ye-RSI, MACD, Moving Averages, nokuningi.
02. Thola isethi yethu yamakhono
Iqiniso liwukuthi - uma ungenalo isethi lamakhono lokwenza ubuchwepheshe
ucwaningo ezingeni eliphakeme, uzokuthola kunzima ukukwenza
ukuzuza okungaguquguquki embonini yokuhweba nge-crypto. Esikhundleni salokho, kukhona wonke amathuba okuthi uzoshaya ngebhalansi ye-akhawunti yakho. Ngokulandelayo, lokhu kukuvumela ukuthi uhwebe izimakethe ze-cryptocurrency ngaphandle kokudinga ukufaka noma yikuphi okusemthethweni.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele futhi siqaphele ukuthi amasiginali wethu we-crypto awafaneleki ama-newbies kuphela. Ngokuphambene nalokho, ungahle ungabi nesikhathi sokucwaninga ngezimakethe. Kanjalo, iCryptoSignals.org ingasiza abadayisi bawo wonke amasethi wamakhono!
03. Ukuhweba neNzuzo
Yilapho i-CryptoSignals.org ingasiza khona. Njengoba sichaza ngokuningiliziwe phansi, izimpawu zethu ze-crypto zizokutshela
konke odinga ukukwazi ukuhweba ngendlela enganaki ubungozi. Lokho ukusho ukuthi, lapho usuthole isignali evela kithi - uzokwazi ukuthi iyiphi i-crypto pair ozoyihweba, noma ngabe kufanele uhambe isikhathi eside noma mfushane, nokuthi iyiphi intengo yokungena nokuphuma ongayikhomba.
Yilokho Amakhasimende ethu Asitshela khona
Bengingazi ukuthi ngenzani kodwa selokhu ngijoyine iqembu lamahhala lamatelegram manje sengivule i-akhawunti nge professional broker futhi nginguye manje ukulandela ukuhweba okuvela eqenjini le-VIP. Manje ngifunda ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe nsuku zonke bese ngilandela i-youtube isiteshi futhi ubuke wonke amavidiyo.
Ngifunde okuningi kakhulu nge-crypto selokhu ngijoyine i-VIP Telegram iqembu. Lapho yimibhalo yansuku zonke Ngiyakwazi funda bese uhweba ukusekela lokho imininingwane. Kuyinto i-10 kwangu-10 kimi.
Ngijoyine iTelegram yamahhala ngase ngithuthukiselwa ngokushesha eqenjini le-VIP. Ngithola ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kufundisa ngempela futhi lokho kungisiza kakhulu ukuthi ngifunde kabanzi nge-cryptocurrency nokuthi ungayidayisa kanjani.
Izimpawu ezinikeziwe kulula kakhulu ukulandela.
SITHUMELA UKUHLAZIYWA OKUGCWELE KWEZOBUCHWEPHESHE NGAYO YONKE IMIHLOBO, BHEKA IZIBONELO ZABASEBENZI BETHU NGEZANSI!
Abahwebi Bethu Baye Bafunwa Kusuka Ezitolo Zokuhweba Ezisuselwa Emhlabeni Wonke!
Ungajoyina mahhala Iqembu le-VIP ngezansi ngokuchofoza inkinobho ukubona izibonelo zokuhweba kwethu.
NGEZIMPAWU ZOKUPHAKATHI KWE-CRYPTO
Awudingi nje kuphela ukuthola amasiginali amahle kakhulu we-crypto atholakala emakethe - kodwa futhi nomthengisi ophakanyiswe kakhulu ukubeka ama-oda adingekayo. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle komthengisi omuhle eceleni kwakho, ngeke ukwazi ukufinyelela indawo yokuhweba ye-crypto.
Ngaphambi kokuthi ubheke nezimali namakhomishini, kubalulekile ukuthi usebenzise amasiginali wethu we-crypto nomthengisi olawulwayo, othembekile. Ngeshwa, indawo enkulu yokuhweba nge-crypto isebenza ngaphandle kwelayisense yokulawula - okuyinkinga kakhulu. Kalula nje, lokhu kusho ukuthi umthengisi akadingi ukuphendula emzimbeni wezezimali wanoma yiluphi uhlobo - ngakho-ke izinto ezinjengokunakekelwa kwamakhasimende nokuvikelwa kwabatshali zimali ngokuvamile azikho. Ukusiza ukukukhomba endaweni efanele - ezinye zezilawuli ezibalulekile ezikule ndawo zifaka i-FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), neCySEC (Cyprus). ...
Njengoba ezinye zezimpawu zethu ze-crypto zikhomba ukuzuza okusheshayo nokuncane, kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe umthengisi ohlinzeka ngamakhomishini aphansi nokusabalala okuqinile. Ngokuphathelene nokwangaphambili, kunabathengi abaningi be-crypto abasebenza esikhaleni esikuvumela ukuthi uhwebe ngaphandle kwekhomishini. Lokhu kusho ukuthi imali kuphela ozoyikhokha iza ngokusabalala.
Akuwona wonke amalungu ethu eqenjini le-CryptoSignals VIP Telegram anenani elikhulu lemali yokuhweba nalo. Uma lokhu kuzwakala njengawe, lokhu akusho ukuthi awukwazi ukwenza impumelelo yezimpawu zethu. Ngokuphambene nalokho, ngokusebenzisa i-crypto broker enikeza amandla, uzokwazi ukuhweba ngokuningi kunakho kwi-akhawunti yakho. Inani lesilinganiso ongalithola lizoncika ezintweni eziningana - njengomthengisi okukhulunywa ngaye nezwe ohlala kulo.
Ngoba umthengisi wakho omkhethile unikeza izimakethe zemali yedijithali, lokhu akusho ukuthi kuzolungela amasiginali wethu we-crypto. Ngemuva kwakho konke, ithimba lethu labahlaziyi bendlu bathanda ukuthatha indlela eyahlukahlukene yokuhweba - okusho ukuthi bakhomba ngababili be-crypto bazo zonke izinhlobo nobukhulu. Isibonelo, isignali eyodwa ingahle ihlobane ne-BTC / USD ngenkathi okulandelayo kungabheka ukuzuza ku-ETH / XRP! Unalokhu engqondweni, kungcono ukusebenzisa i-crypto broker enikeza izinqwaba zezimakethe - ezihlanganisa ngazimbili i-crypto-to-fiat kanye ne-crypto-to-crypto.
Kufanele futhi uqiniseke ukuthi umthengisi wakho we-crypto omkhethile unikeza indlela yakho oyithandayo yokukhokha. Amapulatifomu amahle kakhulu esithanda ukuwasebenzisa anikele ngedebit / credit card kanye ne-e-wallet deposits. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhokhele i-akhawunti yakho ngokushesha futhi ezimweni eziningi - mahhala. Ungahle ufune ukugwema amapulatifomu amukela kuphela izinkokhelo zocingo lwasebhange. Lokhu kungenxa yokuthi kungathatha izinsuku ezimbalwa ukuthi imali ifike.
Kuyasho ukuthi iBitcoin yi-cryptocurrency edayiswa kakhulu kunazo zonke kule makethe. Ngakho-ke, abathengisi bethu bazobheka njalo ukuzuza ngalesi sigaba sempahla enamanzi amaningi. Ngenkathi ezimweni eziningi sizothumela izimpawu zethu zokuhweba zeBitcoin ku-BTC / USD - siphinde sihlanganise ngababili be-crypto-to-crypto. Isibonelo, uma abacwaningi bethu abasendlini becabanga ukuthi i-BTC idlondlobele i-ETH - sizothumela isignali yokuhweba yeBitcoin ngemiphumela yethu. Ukukunikeza umbono wokuthi amasignali amahle kakhulu we-Bitcoin asebenza kanjani lapha ku-CryptoSignals.org - hlola isibonelo esingezansi. Bhangqa: I-oda le-BTC / USD: Sho ...
Ungahle uqaphele ukuthi amasiginali amahle kakhulu e-crypto atholakala emakethe atholakala ngeqembu leTelegram. Lokhu kungenxa yokuthi uzothola amasiginali ekhwalithi ye-crypto ngesikhathi sangempela - okusho ukuthi ngeke uphinde uphuthelwe yithuba lokwenza inzuzo futhi! Amaqembu weTelegram ama-crypto amahle kakhulu anezinkulungwane zamalungu asebenzayo. Lokhu kukuvumela wena kanye namanye amalungu enu ukuba nixoxe ngemibono yokuhweba nge-crypto ngohlelo lokusebenza. Amaqembu weTelegram ama-crypto amahle kakhulu nawo eza nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi sangempela. Okubaluleke nakakhulu, ngokuthola amasiginali wekhwalithi ngeTelegram - i-provid engcono kakhulu ...
Ngaphambi kokuthi ubheke nemali ekhokhwayo namakhomishini, kubalulekile ukuthi usebenzise amasiginali wethu we-crypto nomthengisi olawulwayo, othembekile.
Ngeshwa, indawo enkulu yokuhweba nge-crypto isebenza ngaphandle kwelayisense yokulawula - okuyinkinga kakhulu.
Kalula nje, lokhu kusho ukuthi umthengisi akadingi ukuphendula emzimbeni wezezimali wanoma yiluphi uhlobo - ngakho-ke izinto ezinjengokunakekelwa kwamakhasimende kanye nokuvikelwa kwabatshalizimali ngokuvamile azikho.
Ukusiza ukukukhomba endaweni efanele - ezinye zezilawuli ezibalulekile ezikule ndawo zifaka i-FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), neCySEC (Cyprus).
Njengoba ezinye zezimpawu zethu ze-crypto zikhomba ukuzuza okusheshayo nokuncane, kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe umthengisi ohlinzeka ngamakhomishini aphansi nokusabalala okuqinile.
Ngokuphathelene nokwangaphambili, kunabathengi abaningi be-crypto abasebenza esikhaleni esikuvumela ukuthi uhwebe ngaphandle kwekhomishini. Lokhu kusho ukuthi imali kuphela ozoyikhokha iza ngokusabalala.
Ngoba umthengisi wakho omkhethile unikeza izimakethe zemali yedijithali, lokhu akusho ukuthi kuzolungela amasiginali wethu we-crypto.
Ngemuva kwakho konke, ithimba lethu labahlaziyi bendlu bathanda ukuthatha indlela eyahlukahlukene yokuhweba - okusho ukuthi bakhomba ngababili be-crypto bazo zonke izinhlobo nobukhulu. Isibonelo, isignali eyodwa ingahle ihlobane ne-BTC / USD ngenkathi okulandelayo kungabheka ukuzuza ku-ETH / XRP!
Unalokhu engqondweni, kungcono ukusebenzisa i-crypto broker enikeza izinqwaba zezimakethe - ezihlanganisa ngazimbili i-crypto-to-fiat kanye ne-crypto-to-crypto.
Kufanele futhi uqiniseke ukuthi umthengisi wakho we-crypto omkhethile unikeza indlela yakho yokukhokha oyithandayo. Amapulatifomu amahle kakhulu esithanda ukuwasebenzisa anikele ngedebit / credit card kanye ne-e-wallet deposits. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhokhele i-akhawunti yakho ngokushesha futhi ezimweni eziningi - mahhala.
Ungahle ufune ukugwema amapulatifomu amukela kuphela izinkokhelo zocingo lwasebhange. Lokhu kungenxa yokuthi kungathatha izinsuku ezimbalwa ukuthi imali ifike.
Kuyasho ukuthi iBitcoin yi-cryptocurrency edayiswa kakhulu kunazo zonke kule makethe. Ngakho-ke, abathengisi bethu bazobheka njalo ukuzuza ngalesi sigaba sempahla enamanzi amaningi.
Ngenkathi ezimweni eziningi sizothumela izimpawu zethu zokuhweba zeBitcoin ku-BTC / USD - siphinde sihlanganise ngababili be-crypto-to-crypto. Isibonelo, uma abacwaningi bethu abasendlini becabanga ukuthi i-BTC idlondlobele i-ETH - sizothumela isignali yokuhweba yeBitcoin ngemiphumela yethu.
Ukukunikeza umbono wokuthi amasignali amahle kakhulu we-Bitcoin asebenza kanjani lapha ku-CryptoSignals.org - hlola isibonelo esingezansi.
Ngababili: BTC / USD
Umkhawulo: $ 61,500
I-Stop-Loss: $ 62,000
Isiphakamiso sesiginali seBitcoin ngenhla sibonisa ukuthi abathengisi bethu abangaphakathi ezindlini bakholelwa ukuthi iBTC / USD izokwehla emahoreni azayo. Kepha, asifuni ukungena emakethe ngaphandle kokuthi bobabili bashaye iphoyinti lethu le-trigger elikhethwayo - kulesi sibonelo elingu- $ 61,500.
Ukuqinisekisa ukuthi siyambozwa uma kwenzeka ukuqhubekela phambili phezulu, isiphakamiso sezimpawu zeBitcoin sikweluleka ngenani lokulahleka kokumiswa okungama- $ 62,000.
Lokhu yinto esihlala siyinikeza lapho sisabalalisa amasiginali wethu weBitcoin asezingeni - njengoba sikwazi kahle ukuhweba okungahambisani nobungozi. Izimpawu zethu zokuhweba zeBitcoin ziqukethe ne-oda eliphakanyisiwe lokuthatha inzuzo. Uma kubangelwa, lokhu kuzokhiya ngokuzenzakalela inzuzo yakho kumthengisi wakho we-crypto omkhethile.
Izimpawu Zamahhala Zokuhweba zeBitcoin
Ingabe usemakethe yezimpawu zamahhala ze-Bitcoin? Uma kunjalo, thina kwaCryptoSignals.org sinikela ngenkonzo yama-Bitcoin yamahhala equkethe iziphakamiso ezintathu zokuhweba ngesonto. Ngokungafani nabantu abaningi esincintisana nabo - asikuceli ukuthi ukhokhe imali ethe xaxa ukuveza umkhawulo we-oda noma intengo yokuyeka ukulahleka.
Ngokuphambene nalokho, uzothola lonke ulwazi esiluxoxe ngenhla - ngakho-ke yilelo pair leBitcoin, isikhundla eside noma esifushane, futhi ulinganisele, ukulahleka kokuyeka, namanani entengo yenzuzo.
Isizathu sokuthi sinikeze amasiginali wokuhweba weBitcoin wamahhala ukuthi lokhu kuvumela amalungu amasha ukuthi ahlole insiza yethu ngaphambi kokuzibophezela. Ngokweqile, konke okudingeka ukwenze ukuthola amasiginali wethu wamahhala we-Bitcoin ukubhalisa i-akhawunti nathi lapha ku-CryptoSignals.org.
Awudingi ukufaka noma yiziphi izimali ukuthola ukufinyelela kumasiginali wethu wokuhweba wamahhala we-crypto. Esikhundleni salokho, uma usubhalisile - ungaya ngqo eqenjini lethu lesiginali yeTelegram yamahhala!
Ungahle uqaphele ukuthi amasiginali amahle kakhulu e-crypto atholakala emakethe atholakala ngeqembu leTelegram. Lokhu kungenxa yokuthi uzothola amasiginali ekhwalithi ye-crypto ngesikhathi sangempela - okusho ukuthi ngeke uphinde uphuthelwe yithuba lokwenza inzuzo futhi!
Amaqembu weTelegram ama-crypto amahle kakhulu anezinkulungwane zamalungu asebenzayo.
Lokhu kukuvumela wena kanye namanye amalungu enu ukuba nixoxe ngemibono yokuhweba nge-crypto ngohlelo lokusebenza.
Amaqembu weTelegram ama-crypto amahle kakhulu nawo eza nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi sangempela.
Okubaluleke nakakhulu, ngokuthola amasiginali wekhwalithi ngeTelegram - abahlinzeki abahamba phambili kule ndawo bazophinda banamathisele igrafu noma ishadi kusiphakamiso ngasinye.
Ngamanye amagama, amaqembu amahle kakhulu we-crypto amasiginali weTelegram akuvumela ukuthi uzuze futhi ufunde ngasikhathi sinye.
Ngaphambi kokuthi uqale ngeqembu elihle kakhulu le-crypto Signals Telegraph oyikhethile - singaphakamisa ukusetha isaziso sangokwezifiso. Ngokuqinisekisa ukuthi lesi saziso somsindo siyingqayizivele eqenjini lakho lezimpawu ze-crypto Telegraph - uzokwazi ukuvula uhlelo lokusebenza khona manjalo ukuze ukwazi ukubeka ama-oda aphakanyisiwe.
Iqembu lamahhala le-Crypto Signals Telegram
Abanye benu bangafuna ukuzama amasiginali wethu wekhwalithi ye-crypto ngaphambi kokuthuthukela kuhlelo lwethu lwe-premium. Uma kunjalo, uzokujabulela ukwazi ukuthi sinikeza neqembu leTelegram le-crypto lamahhala le-crypto lamahhala. Lapho nje usujoyine isiteshi sethu seTelegram esikhula njalo - uzothola amasiginali ama-3 x wamahhala we-crypto ngesonto.
Lokhu kungafaka amabili we-crypto-to-crypto njenge-BTC / EUR, BTC / USD, noma i-ETH / USD. Kwezinye izimo, ezinye zezimpawu zethu zamahhala ze-crypto zizohlanganisa ngazimbili eziqukethe amafa amabili edijithali. Isibonelo, sithumela njalo amasiginali wethu wamahhala we-crypto ku-BTC / ETH, BTC / XRP, naku-ETH / LTC.
Lapho usuthole isignali ye-crypto yamahhala ngeqembu lethu leTelegram - konke okudingeka ukwenze ukubhekisa kumthengisi wakho omkhethile bese ufaka ama-oda aphakanyisiwe. Eqinisweni, uma ungumhwebi okhaliphile - cishe uzonquma ukusivivinya nge-akhawunti yedemo yama-brokerage yamahhala.
Ngokwenza njalo - awudingi ukubeka engozini ipeni elilodwa kumasiginali wethu wamahhala we-crypto. Esikhundleni salokho, uzobe ubeka ama-oda ethu aphakanyisiwe 'ngezimali zephepha'. Ngemuva kokuthi indawo ngayinye yesiginali ivaliwe - ungabhala phansi umphumela wesikhundla.
Isibonelo, uma senze ama-pips angama-25 kusiginali yamahhala ye-crypto, qiniseka ukwenza inothi yalokhu. Ekupheleni kwesivivinyo sakho - uma uthola ukuthi amasiginali wethu wamahhala we-crypto ahlangabezane nokulindela kwakho - ungahle ucabange ukukhuphukela ohlelweni lwethu lwe-premium. Ngokwenza njalo, uzothola amasiginali ama-premium e-3-5 nsuku zonke!
YINI ehlanganisiwe ku-VIP CRYPTO SIGNAL YETHU ITHELEGRAM IQEMBU
Joyina amalungu ethu akhona ayi-10,000 + avela kuwo wonke umhlaba abelokhu enza inzuzo kusuka kithi Izimpawu ze-VIP Crypto futhi babe abadayisi abangochwepheshe.
3-5Izimpawu ze-Crypto ngosuku
Ingabe usukulungele ukuba
UMPHATHI OPHUMELELAYO WE-CRYPTO?
ICryptoSignals.org iyiqembu labathengisi abaqeqeshwe kakhulu abebelokhu behweba imakethe ye-cryptocurrency kusukela ngo-2014, sanquma ukwakha umphakathi ku yocingo ukuze abanye bafunde kwizimpawu zethu ezinembile ze-idijithali yemali.
Izimpawu Zamahhala Zamahhala Ze-Crypto May 2022 & Crypto News
I-Fort Street, i-Artemis House,
I-Grand Cayman, KY1-1111,
© 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG. KONKE KUGCINWE. Imininingwane ekuwebhusayithi ye-cryptosignals.org nangaphakathi kweqembu lethu leTelegramu ihloselwe izinjongo zokufundisa futhi akufanele kuthathwe njengeseluleko sokutshalwa kwezimali. Ukuhweba izimakethe zezimali kuthwala izinga eliphezulu lobungozi futhi kungase kungafaneleki kubo bonke abatshalizimali. I-Cryptosignals.org ayinaso isibopho sokulahlekelwa okutholiwe ngenxa yokuqukethwe okunikezwa ngaphakathi kwamaqembu ethu eTelegramu.